Iyo chitsitsinho kukwirira kwe9.0cm inoyevedza uye inofamba, iyo inodzika zvishoma kubva pamakumbo makatetepa, uye chimiro chakatetepa. Iyo inotsigira inoyevedza kudonha chimiro chemukadzi anotapira, uye chitsitsinho chakanyatso kukombama.
Model Nhamba: BK2176
Feature: Anti-kutapata, Anti-kutedzemuka, Anti-kutedzemuka, Anti-kutedzemuka, Anti-kutedzemuka,
Mamiriro ekunze ari kuwedzera kupisa, inguva yekutenga shangu nyowani nyowani! Bhandi dzeshangu dzakakurumbira kwazvo mumakore maviri apfuura, asi gore rino, shangu dzeshangu dzinonyanya kufarirwa. Iri zhizha, kana iwe usina shangu mbiri dzakasungwa, unonyara kuzvidaidza kuti uri mufashoni!
Iyo shangu dzakashongedzwa dzakanyatso kunatswa uye dzechikadzi pane yakapfuura imwe-tambo shangu. Yakaburitswa yakawanda yeganda retsoka, ichiratidza kugona kwepamusoro.
Kune vasikana vane yakawanda yeganda inodzika, shangu dzakashama dzakaita senge dhizaini, inoratidzira emhando yepamusoro, anoyevedza uye epamberi tsoka dzetsoka dzavo.
Iwo iwo mutete-tambo tambo dzakatenderedzwa hadzina kusanzwisisika pane iwo matete-tambo dzeshangu. Vasikana vane fashoni vanokodzera shangu dzakakombama, kunyangwe kana vakapfeka zhizha rese, hazvisi nyore kuneta.
Runako rwehwashu dzakakwenenzverwa ndedzekuti dhizaini iri nyore uye haidhonze meso. Inogona kuve yakajeka kwazvo nechero chipfeko. Dhizaini iri nyore, asi zvakaoma kufuratira kuvapo kwayo.
Semuenzaniso, dzimwe hembe dzinorema uye dzakaomarara, dzakabatanidzwa neshinda-kiyi neshangu dzeshangu dzakapfava, hadzirerekere, ndedzemafashoni uye dzinoenderana. Paunobuda seizvi, munhu wese anozvirova dundundu kuti iwe unogona kuupfeka.
Shangu dzakanaka chete hadzigone kurarama kwauri
Iyo nyika yatinonyanya kuda kuratidza ndeye kutsanangura mutsara werufaro,
Sarudza mavara akanaka
Iyi dhizaini yakadzidzwa uye ikakwenenzverwa kwenguva yakareba kubva pamifananidzo kusvika pakupedzisa chigadzirwa
Kuratidza kakawanda kuti uedze
Iyo pakupedzisira inogadzirwa mune yakapera chigadzirwa
Pashure: 2021 refu chitsitsinho mesh bhutsu
Zvadaro: 2021 zhizha nyowani-refu-shangu shangu
Yakasarudzika logo satin yepamusoro mhando fashoni ...
Sexy vakadzi vakadzi rhinestone vakasununguka sirika machira l ...